Public Kura | » ‘युवाको हकहित र विकास मेरो मुख्य एजेण्डा हुन्’ ‘युवाको हकहित र विकास मेरो मुख्य एजेण्डा हुन्’ – Public Kura
‘युवाको हकहित र विकास मेरो मुख्य एजेण्डा हुन्’
मुलुक अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको रापतापमा छ । यस्तो बेला रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिका उपप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका संरक्षणकर्मी ३४ वर्षीय अर्जुन कुर्मीको अहिले चर्चा भइरहेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनको चुनाव चिन्ह भुँइकटर हो । लुम्बिनीलाई विश्वस्तरको सहर बनाउने लक्ष्यसहित उनले लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिकाको उपप्रमुख (उपमेयर) पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । चुनाव चिन्ह र उम्मेदवारको प्रभावका कारण अहिले कुर्मीको तुलना चितवनका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलसित भइरहेको छ । कुर्मी युवाहरुमाझ भिजेका संरक्षण र सामाजिक अभियन्ता हुन् । लुम्बिनीको बिकास र परम्परागत राजनीतिमा परिवर्तनका लागि आफूले जित्नु पर्ने कुर्मीको भनाई छ । दिनरात नभनी घरदैलो र मतदाता भेटघाटमा सक्रीय कुर्मीसित पब्लिक कुराले गरेको कुराकानी :
बिगत पाँच वर्ष आफै जनप्रतिनिधि नभए पनि नागरिकको ‘सेवक’का रुपमा बिताएको छु । लुम्निी सांस्कृतिक नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मनमोहन चौधरीको निकट रहेर पूर्वाधार र सामाजिक बिकासमा जनतासित हातेमालो गर्ने अवसर पाएको थिएँ । अर्कोतर्फ म लामो समयदेखि संरक्षणका क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै आएको व्यक्ति हुँ । लुम्बिनीको पर्यावरण र दुर्लभ सारस संरक्षणमा मैले काम गरिरहेको छुँ । त्यस अगाडि विभिन्न गैरसरकारी संस्था मार्फत गाउँघरमा काम गरेको छु । लुम्बिनीका नागरिकले मलाई प्रत्यक्ष रुपमा चिनेका छन् । मैले संरक्षण कार्य मार्फत स्थानीय युवालाई एकजुट राख्न सफल छु । अहिलेसम्मको नेतृत्वले नगरपालिकामा परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । त्यसैले मेरो उम्मेदवारी हो ।
तपाइँका मुख्य एजेण्डा के–के हुन् ?
युवाको हकहित र बिकास मेरो मुख्य एजेण्डा हो । जमाना परिवर्तन भइसक्यो, हामी जहाँको त्यही छौं । त्यसैले यहाँका बासिन्दाको सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा वर्षौदेखि सिमित व्यक्तिले राजनीतिमा रजगज चलाउँदैं आएका छन् । अहिलेसम्म लुम्बिनी बिकास कोष र स्थानीयबीच सम्बन्ध बिस्तार हुन सकेको छैन । म बिजयी भएपछि लुम्बिनी बाहिर मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारण ल्याएर काम गर्न चाहन्छु । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणापछि कोषको आम्दानी स्थानीयसम्म आउँछ । युवा र लुम्बिनीका आधारभूत आवश्यकता समेटेर मैले एजेण्डा तय गरेको छु । एक घर, एक उद्यमी तयार गर्छु । लुम्बिनीका युवाका लागि खेल मैदान मेरो प्राथमकिता हो । किसानलाई मल र बीउ अनुदानका लागि ‘कृषि कार्ड’ लागू गर्ने योजना छ ।
यी बाहेक तपाइँका अरु केही योजना छन् की ?
लुम्बिनी क्षेत्रको सिंचाई समस्या समाधान गर्छु । लुम्बिनीलाई निःशुल्क वाइफाई जोन बनाउँछु । सामुदायिक विद्यालयकोस्तर सुधार गरेर आधुनिकिकरण गर्ने योजना रहेको छ । खुला जिमशाला तयार गर्छु । छोरीका लागि प्रविधिमा आधारित शिक्षा व्यवस्था गर्नेछु । नगरपालिकामा रहेका रिक्सा, ट्याक्सी र अन्य वाहनलाई लुम्बिनी बिकास कोषभित्र प्रवेशमा लाग्दै आएको शुल्क हटाउन पहल गर्नेछु । होमस्टे सञ्चालन गरेर आय बढाउने योजना छ । संरक्षण र वातावरणको क्षेत्रमा विशेष योजना ल्याउनेछु । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन भूमिका खेल्ने र दीर्घ र समस्याग्रस्त रोगीको उपचार निःशुल्क गर्ने मेरो योजना छ । कालीदहमा रहेको छोटी भन्सार स्तरोन्नतीका लागि पहल गर्नेछु ।
तपाइँलाई नै मतदाताले किन रोज्ने ?
लुम्बिनीमा रजगज चलाउँदैं आएका सिमित व्यक्तिबिरुद्ध कसैले प्रतिष्पर्धा गर्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसैले युवाहरुको आकांक्षा अनुसार म उम्मेदवार बनेको हुँ । यस्ता सिमित नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि नयाँ पुस्तालाई अवसरै नदिने परम्परा छ । नेता र दलले पुराना कार्यकर्ता मात्रै हेर्छन् । ठूला नेताको चाकडी गर्नेलाई मात्र महत्व दिन्छन् । म पनि यस बीचमा धेरै दल निकट पुगेको थिएँ । त्यसक्रममा नेताको चाहना झोला बोकाउने मात्र रहेको थाहा भयो । त्यसपछि मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी रोजेको हुँ । यसपाली पनि दलहरुबाट पनि अफर आएको थियो । तर, ती दलहरुको चाहना आफ्ना उम्मेदवार जिताउने भूमिकाका लागि मात्र थियो । त्यसैले मेरो स्पष्ट योजना छ । युवाहरुको प्रतिनिधि गर्छु । प्रविधिसँग नजिक छु । लुम्बिनी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खाका कोरेर अघि बढेको छ । युवा, महिला, जनताति, सबै धर्मसंस्कृति, जातजातिको साझा प्रतिनिधि म बन्न सक्छु । नगरलाई समृद्ध बनाउन अब युवालाई नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ । पुरातनवादी सोंचबाट लुम्बिनीको विकास हुँदैन ।
तपाइँको जितको आधार के हो ?
सानै उमेरदेखि मतदाताको नजिक रहेर काम गरेकाले मेरो जनसम्पर्क राम्रो छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा गठबन्धन दलभित्र एकता छैन । गठबन्धनमा आवद्ध दल आफ्नै किसिमले प्रतिष्पर्धामा छन् । सबै दलका उम्मेदवार छन् । एमाले विभाजन भएपछि मतदाता विभाजित मनस्थितिमा छन् । मधेशबादी दल छिन्नभिन्न छन् । त्यसैले यहाँ कसैसित पनि एकमुष्ट जनमत छैन । मसित सबै उमेर समूहका मतदाता छन् । युवाको मप्रति क्रेज छ । अहिलेको परिस्थितिमा म लुम्बिनीको ‘गेम चेन्जर’का रुपमा छु । स्पष्ट अडानसाथ जनताका पीडा राख्न सक्ने क्षमता र लुम्बिनी बिकासको भिजन मसित रहेकाले मतदाताले पत्याउने विश्वास लिएको छु ।